Morning Update: Filimka Kesari iyo sida uu subaxan ku furmay – Filimside.net
Morning Update: Filimka Kesari iyo sida uu subaxan ku furmay
March 21, 2019 Zakarie Abdi
Superstar Akshay Kumar filimkiisa Kesari ayaa subaxan tiyaatarada Hindiya la saaray balse qaab xadidan ayaa masraxa loo saaray weliba 75% ilaa 80% tiyaatarada xiliga duhurkii ayaa albaabada loo furi doonaa marka feestada Holi soo idlaato sidaa darteed subaxan 25% ilaa 20% tiyaatarada ah ayaa filimkan laga daawan karaa.
Sida guud Kesari 3600 tiyaatar ayaa la saarayaa maanta balse subaxan tiyaataradan badankooda waa la xadidan madaama dadka feestada Holi ku maqan yihiin ma rabaan kooxda filimkan in fagta hore loo soo daawasho tagi waayay sidaa darteed dadka yar ee firaaqada heli karaan ayaa Kesari subaxan daawanayaan halka shacab weynaha albaabada tiyaatarka loo furi doono wixii ka dambeeyo duhurkii.
Fadlan walaal xayeysiimaha web-ka Filimside Ku Dhufo hal mar oo kaliya xayeysiinta ka muuqato qoraalka aad aqrisaneysid.
Filimka Kesari subaxaan wuxuu ku furmay 25% ilaa 30% mana ahan bilaabasho xun waa bilaabasho dhex dhexaad ah waxaana la rajeynaa in maanta duhurkii, galabta iyo caawo fiidkii in heerkiisa ugu sareeyo uu gaari doono.
Marka aan fiirino daruufaha maanta uu Kesari la kulmaayo subaxdii hore iyo siyaasada qamaarka ah ee kooxda filimkan qaateen wuxuu damaanad qaad u heli karaa filimkan in 15 Crore maalinta kowaad keeno haddii siweyn uu u gadmo maanta duhurkii iyo caawo fiidkii markaas meesha lagama saari karo 20 Crore inuu gaaro.
Waxaa Aqrisay 262